Ny tsara indrindra amin'ny fihaonana an-tampon'ny BIM 2019 - Geofumadas
Jiona, 2019 Engineering, fanavaozana
Ny Geofumadas dia nandray anjara tamin'ny hetsika iraisam-pirenena iray manan-danja indrindra mifandraika amin'ny BIM (Building Information Maganement), ny BIM Summit 2019, natao tao amin'ny AXA Auditorium tao an-tanànan'i Barcelona-Espana. Ity hetsika ity dia nialoha ny BIM Experience, izay ahafahanao mahita ny mety hitranga mandritra ny andro manaraka.
Ny andro voalohany tamin'ny BIM Experience, nizarana lohahevitra telo ireo hetsika mba hahafahan'ny mpanatrika hifantoka amin'ny fifantohana amin'ny tombontsoany, ny voalohany amin'izy ireo Manangana miaraka amin'ny BIM, ny faharoa Softwares sy BIM tombontsoa, ary ny fahatelo mitondra ny lohateny BIM miaraka amin'ny lehibe I. Ny orinasa Roca dia nandray anjara tamin'ny solontenany Ignasi Pérez, izay nanazava ny maha-zava-dehibe ny BIM ho an'ny fananganana, ary koa mampiseho toy ny Data Fanamafisana ny fanorenana: DIN2BIM nataon'i PINEARQ, o Fitantanana ireo tetikasa fananganana tafiditra amin'ny alàlan'ny TeamSystems Open BIM.
Nandritra io hetsika io, dia nanana fahafahana izahay nihaona tamin'ireo solontenan'ny orinasa goavam-be tao amin'ny tontolon'ny BIM, anisan'izany izahay nanonona ny BASF, izay naneho ny Master Builders Solutions, rindrambaiko mamela hanafainganana ny fikarohana vokatra sy zavatra BIM. BASF, dia nasehony ny mpanatrika ny fomba fiasan'ny lozisialy amin'ny tranga tena izy, amin'ny alàlan'ny teknolojia virtoaly virtoaly.
Ity tranga ity dia maneho ny fitsidihana ny asa ary ny fomba fitantanana ny modely BIM amin'ny fotoana mahamety ny vahaolana natolotr'ilay rindrambaiko, ahafahany maminavina ny vokatra farany; Izany dia lalao tena mety avy amin'ny BASF, izay nanolotra ny mpihaino ihany koa baoritra mba hiaina ny traikefa tanteraka.
"Ho an'ny tetikasa iray manokana dia manome tolo-kevitr'ireo vokatra ilaina izany ary mamela anao haka ny fampahalalana rehetra momba ireo vokatra ireo, anisan'izany ny tetikasa BIM automatique, tsy mila mandeha amin'ny trano famakiam-boky ary mampiasa ny sivana". Albert Berenguel - Mpitantana ny Marketing Manager an'ny BASF Construction Chemicals Espaina
Koa, dia fantatra ny Ekipa Visual Teknolojia Lab orinasa natao mba hamorona vahaolana ho an'ny rehetra nandray anjara tamin'ny rojo ny fanorenana, toy ny firaka BIM maodely family-solomaso virtoaly / augmented zava-misy na ny finday fitaovana toy ny finday na ny takelaka , miaraka amin'ny tanjon'ny fitantanana ny BIM eo amin'ny toeram-piasana. Ateriny be dia be ny asa ao anatin'izany: fampidirana BIM amin'ny virtoaly tena zava-misy sy ny zava-misy augmented, multi-VR BIM modely na lahatsary 360º / 3D-360º sary.
"Visual Techology dia manolotra rindranasa miasa amin'ny finday na takelaka ary ny ataontsika dia mametraka boaty fivoriana amin'ny maodely, mametraka marika marindrano eo aminy izahay ary manondrana izany boaty fivoriana izany fa tsy ilay maodely manontolo, fa izay tadiavinay ihany miaraka amin'ny finday, izay nametraka teknolojia teo aloha raha Apple ARKit na Android ARCore, azo atao ny manova ny refin'ny maodely, manamarina ny karazana fitaovana na singa izay misy ny maodely, endrika, famaranana ary mamorona fitambarana ”. Iván Gomez - Lab Teknolojia Visual
Avy eo foana nitsidika ny famelabelarana tsirairay ny mpandahateny, no ahitantsika ny solontenan'ny Lumion Sanchiz Alba, izay nanazava ny fomba vaovao Lumion dikan 9, fitaovana miasa - iray atao ny milaza hoe, mihoatra noho ny ilaina ho an'ireo izay mila mampiasa fotoana bebe kokoa amin'ny famolavolana fanorenana fa tsy amin'ny dingan'ny fandehanana. Ity rindrambaiko mamela ny tena lanjan'ny CAD / BIM lasitra ka omeo azy ireo fomba tsotra.
"Lumion 9 manohana BIM rindrambaiko toy ny trano sy famolavolana. Sketchup, tokantandroka, GraphiSoft ArchiCAD, Autodesk 3DS Max, Allplan, Revit, Vectorworks sy AutoCAD" Alba Sanchiz -LUMION
GraphiSoft solontenan'ny nampiseho ny vaovao dikan-ArchiCAD 22, iray amin'ireo mpisava lalana eo amin'izao tontolo izao BIM rindrankajy - tahirin-kevitra sy ny fitantanana ny fandrindrana ny projects- kosa tsy misarom-boaly ny sehatra vaovao ho an'ny fampiofanana.
"Ny sehatra fampiofanana dia mifototra amin'ny rafitra fanoratana, tena vaovao, mikendry ny mpianatra sy ny matihanina. Tsy mandoa haba manokana ianao, fa miaraka amin'ny famandrihana dia azonao atao ny mahazo miditra amin'ny sehatra rehetra sy ny ambaratonga rehetra misy , arakaraka ny filàn'ny mpampiasa, nohamarinina sy nohamarinina tamin'ny GRAPHISOFT ". GraphiSoft-ARCHICAD
Tsy afaka ny tsy hiraharaha ny solontenan'ny 5 Nordic firenena, Danemark, Soeda, Failandy, Islandy sy Soeda fa izany fanontana manokana ny BIM 5ta Summit- tsirairay ny famelabelarana nifantoka tamin'ny -Guests ny milaza fa misy mbola Fomba lava mankany amin'ny lohahevitra BIM.
Anisan'ireo exponents, Gudni Gudnasson, izay niresaka momba ny zava-tsarotra rehetra aseho amin'ny alalan'ny fametrahana paikady BIM koa Jan Karlshoj manazava ny fiantraikan'ny fepetra openBIM-bahoaka tao Danemark, tamin'ny farany manasongadina Anna Riitta Kallinen izay nampiseho ny Ny tetikasa RASTI, ho tetikady sy lalana ho an'ny fanarahamaso ny fitantanana ny fampahalalam-baovao ao amin'ny tontolo natsangana.
Manohy ny dia ny famelabelarana, miaraka amin'ny fanolorana ny solontenan'ny Bentley Systems Anna assama, izay nitondra fanaintainana mba hahatakatra ny maha zava-dehibe ny fanavaozana teknolojika, ny fifandraisany amin'ny tontolo iainana, ary araka ny Bentley Vaovao ny faravodilanitra ny alalan 'izany fanavaozana vaovao momba ny fampidirana ny tontolo iainana amin'ny vanim-potoanan'ny fanorenana.
"Synchro, dia tsy simulation ny 4D sy ny vanim-potoana, sehatra fitantanana ny fitantanana" - Ana Assama - Bentley Systems
Avy eo assama nanazava, inona avy ireo fitaovana izay manome Bentley, nanomboka tamin'ny condensation ny tahirin-kevitra eo amin'ny rahona-rahona ireo fahaiza-manao fanompoana fanadihadiana - Power bi-, mikasa - SYNCHRO fiterahana, fanaraha-maso sy ny fiasa izany -SYNCRO XR- mandray rehetra Fitaovana fanatanjahan-tena, tanteraka noho izany dia mamorona rafitra iray manontolo.
"Synchro dia na inona na inona, fa ny famolavolana fandaharana amin'ny Synchro Afaka manao drafitra sy ny fitantanana vaovao, angon-drakitra 3D ihany no nitondra modely asa, izany hoe manomboka ny daty sy ny farany, dia azo tombanana araka ny ho vita ny asa miaraka amin'ny Analytics "Anna Assama - Bentley Systems
Ny fampiroboroboana dizitaly dia mety ho anisan'ny zava-misy ara-batana, amin'ny alalan'ny Synchro XR ho an'ny Hololens, singa iray tena ilaina amin'ny fanao mahazatra, ankehitriny azonao atao manangana ny fanaraha-maso ny zava-misy iainan'ny tontolo iainana.
Iray amin'ireo vaovao lehibe indrindra, izay voatonona tao amin'ny Vovonana BIM 2019, ny hoe, ho an'ny Governemanta Catalonia, ny fampiasana ny BIM dia tsy maintsy atao amin'ny asa sivily sy ny asa fanorenan-trano rehetra; Io dia nambaran'ny sekretera jeneraly misahana ny faritany sy ny fitohizan'ny governemanta Catalonia - Ferrán Falcó. Hihatra manomboka amin'ny 11 Jona amin'ity taona ity ny fepetra ary hanana vola mihoatra ny 5,5 tapitrisa Euros. Marihina fa, amin'ny faritany maro any Espana, ny fampiasana ny BIM dia takiana amin'ny tetikasam-pananganana ho an'ny daholobe
Ao amin'ny andiany BIM 5ta Summit, tsy afaka misafidy izay no tsara indrindra, satria fotsiny hoe manome topimaso ny zavatra rehetra izay mampiditra ny tambajotra lehibe ny lehibe, na fitaovana kely orinasa, mpikaroka, manam-pahaizana, mpianatra, maneho izao tontolo izao lehibe izay mety ho tian'ny mpampiasa maro hifandray.
Izy io dia manasongadina ny fizotran'ny fampiratiana azy, haneho ny fanavaozana ara-teknolojika tsirairay, ary hahatonga ny mpitsidika hahatakatra ny fomba ahafahan'izy ireo manova ny fomba nandrafetantsika ny tontolo misy antsika ary hamorona asa vaovao na zavatra haingana, haingana.
Misaotra ireo rehetra izay nanome fanazavana ny BIM, ary nanolotra ny fanavaozana, toy ny mpikambana ao amin'ny simbim Solutions, BIM Academy, MUSAAT, ASSA ABLOY, ACCA, CALAF, ArchiCAD, Smart Building, Sekoly Momba ny Teknolojia ny fanorenana Catalonia- IteC, ProdLib. Pinearq, TeamSystem Fanorenana sy Construsoft, ny farany dia nahazo ny mari-pankasitrahana noho ny tsy fivadihana BIM Summit 2019 ity.
Miandrandra ny hetsika manaraka mifandraika amin'ity lohahevitra ity izahay, antenaina hampiditra teknolojia toy ny rafitra fampahalalam-baovao GIS - Geographic, ilaina amin'ny famaritana ny fizotran'ny habakabaka, ny fifandraisany amin'ny BIM ary ny rojo manontolo izay misy tetikasa fanorenana. Handeha isika!
Previous Post«Previous Fitsapana ny maha-marina ny angon-drakitra Google alt - Surprise!
Next Post Nanangana ny Geo-Engineering izahay - ilay gazetymanaraka »